Bayaan ku saabsan Madaxweynaha Trump ee 2019 Codsiga Miisaaniyadda Federaalka
Madaxweynaha McKnight Kate Wolford ayaa dhawaan ku biiray hoggaamiyeyaasha aasaasiga ah ee waddanka oo dhan si ay u saxiixaan bayaankan taageerada Dammaanadda Qaranka ee Farshaxanka. Tan waxaa markii hore la soo dhajiyay ArtPlace America, wada shaqeynta aasaasiga ah, hay'adaha federaalka ah, iyo hay'adaha maaliyadeed ee ka shaqeynaya inay ku meeleeyaan farshaxanka iyo dhaqanka oo ah qaybta ugu muhiimsan ee qorshaynta iyo horumarinta beesha.
Madaxweynaha Trump ayaa bixiyay codsiga miisaaniyadda Golaha Kongareeska sannadka 2019, oo soo jeedinaya dhimis weyn iyo, xaaladaha qaarkood, si buuxda looga tirtiro hayadaha federaalka ee muhiimka ah - sida Deeqda Qaranka ee Farshaxanka. Tani waxay suurtogal u tahay inay soo afjarto maalgashiga qaaliga ah ee qiimaha leh ee beelaha degaannada ah iyo in la jaangoyno iskaashi weyn oo lala yeesho deeq-bixiyeyaasha oo adkeeyay waddankeenna.
Hal tusaale oo kaliya, 2011-kii, waxaa nalagu dhiirrigeliyay shaqadan Dalladaha Qaranka ee Farshaxanka waxay qabatay iyada "Magaalada"Maalgelin aan isku keennay si aan ugu faa'iideyno ArtPlace America, taas oo u jirta in la kordhiyo oo lagu dhiso hawlaha dawladda federaalka ah ee uqaabilsan dhinaca farshaxanka iyo dhaqanka si ay u abuuraan bulshooyin siman, caafimaad leh, iyo kuwo waara oo dhan oo dhan ee dalka oo dhan.
Iskaashigan - oo maal-galiyay in ka badan $ 100 milyan ilaa taariikhda bulshooyinka dalka ka yimid Kivalina, AK ilaa Boston, MA, laga bilaabo Bastrop, TX ilaa Minot, ND - wuxuu noo ogolaaday in uu si dhow u eego waxa suurtogalka ah oo kaliya marka deeqaha gaarka ah ee gaarka loo leeyahay ay leeyihiin lammaanayaal adag oo xoog leh oo ka socda dawladda federaalka.
Toddoba sano ka hor, waxa uu ahaa Guddoomiyaha Qaranka ee Qaranka ee Farshaxanka kuwaas oo awooday inaanu isu keenno hoggaamiye aasaasiyan sababtoo ah hay'addiisu waxay leedahay taariikh xoogan oo maal-galin ah oo ka mid ah bulshadeena. Waxa uu sidoo kale awooday in uu isu keeno mas'uuliyiin sarsare oo ka socda hay'adaha sida Wasaaradda Beeraha, Waaxda Guriyeynta iyo Horumarinta Magaalooyinka, iyo Hay'adda Ilaalinta Deegaanka sababtoo ah waxa uu ahaa mid u dhigma dawladda federaalka.
Si wadajir ah, waxaan ka shaqeynay si wax-ku-ool ah oo ka badan sidii aan u sameyn karno kali ahaan sababtoo ah qaybta dowliga ah iyo deeq-lacageedka aan loola jeedo in ay sameeyaan wax isku mid ah.
Hay'adaha Federaalka waxaa lagu soo oogay inay u adeegaan dhammaan dadka Maraykanka ah ee ka tirsan beesha. Ma jiro wax kharaj gaar ah oo khaas ah oo leh kheyraadka ama kaabayaasha si loo sameeyo. Doollar saldhiga waxaa loola jeedaa in ay noqdaan raasumo khatar ah maalgelinta dowladdu waxay u jirtaa inay keento waxqabadyo la baaray si loo cabbiro Xukuumaddu waxay u jawaab celineysaa codbixiyayaasha iyada oo loo marayo wareegyada doorashada; aasaaska ayaa lagu soo oogay in ay ku fakarayaan waqti dheer.
Waxaan ku dhex marnay ballanqaad la wadaago si loo xoojiyo bulshooyinka maxalliga ah. Iyo, kiiskan, waxaanu isu nimaadnay sababtoo ah waxaan dhamaanteen fahamsanahay in farshaxannadu ay yihiin kheyraad joogta beel kasta. Waxaan sidoo kale fahamsanahay in farshaxan-yahannadu ay naga caawinayaan beelaha, ka caawinta inay nala xiriiraan deriskeena, iyo in aan gacan ka gaysano sidii aan u wadno ka qayb-qaadashada bulshada. Si fudud, waxaan fahamsanahay inaysan suurtagal ahayn in ay leeyihiin bulshooyin xooggan oo aan lahayn awood farshaxan iyo mid dhaqameed.
Haddii aan luminay hay'adaha federaalka sida Deeqda Qaranka ee Farshaxanka, maaha kaliya inaan luminayno maalgashi toos ah oo beelaha kuyaala dhammaan 50 dawlad goboleed, waxaan sidoo kale luminaynaa kaabayaasha naga mid ah hal waddan oo Maraykan ah.
Madaxweyne iyo Wakiil
Madaxweynaha iyo Agaasimaha Guud
Max M. iyo Marjorie S. Fisher Foundation
Ogaysiisyada 2021 ee Farshaxanka Farshaxanka